Ukwazisa nge-Airbnb Plus
Zonke izinto ezenza uhlale kamnandi, nezinye izinto
Amakhaya ekucetywe kakuhle xa ebeyilwa. Ababuki zindwendwe abahamba phambili. Umgangatho wayo uqinisekisiwe.
I-Airbnb Plus yindlela entsha yokukhetha kuphela awona makhaya asemgangathweni ophezulu anababuki zindwendwe abadume ngokunconywa kakhulu nokuqwalasela iinkcukacha.
Khaya ngalinye lityelelwa ngumntu ukuze lihlolwe ukuba lisemgangathweni ibe lenziwe kakuhle. Khangela nje uphawu lwe- PLUS.
Ukuyila okucingwe kakuhle
Indawo nganyeI-Airbnb Plus yahlukile, ihonjiswe ngokucingisisiweyo, kwaye ixhotyiswe ngoluhlu olumiselweyo lwezinto onokuzisebenzisa—nokuba ngaba ligumbi elinye okanye usebenzisa indlu yonke.
Yonke indlu ka-Allyson eSan Francisco
Hlola imizi ye-Airbnb Plus eSan Francisco
Ukuhlolwa komgangatho ngumntu
Ikhaya ngalinye le-Airbnb Plus liqinisekisiwe ukuba lisemgangathweni ibe lenziwe kakuhle ukuqinisekisa ukuba zonke izinto ezifunekayo ukuze uzive esekhaya zikhona—kungakhathaliseki ukuba uphi emhlabeni.
Indlu yonke kaLilian Jin eShanghai
Amakhaya ase-Airbnb Plus kulapho ufumana izindlu ezikumgangatho ophezulu nezicetywe kakuhle xa beziyilwa - yonke into yazo. Ziyilwe kakuhle ibe zibonisa ubuntu bomnikazi wazo, ngoko zikwenza uzive wamkelekile ibe zintle.
Indlu engasemva yeendwendwe zonke zikaMatt eLos Angeles
Unokulindela izinto ezifanayo onokuzisebenzisa ezikwenza uzive usekhaya–ukususela kwi-Wifi enesantya esiphezulu kunye neTV elinde wena ukusa kwikhitshi elinazo zonke izinto ezifunekayo ukuze upheke. Izinto nje ezimbalwa kwezifumanekayo:
Amanzi acociweyo okanye asezibhotileni
Izinto zokupheka ziquka i-oli, izitya kunye nezinto zokuphaka
I-ayini nomatshini wokomisa iinwele
Yonke indlu kaRob eKapa
Ababuki zindwendwe be-I-Airbnb Plus bayaqinisekisa ukuba indlu icocekile, iqoqoshekile yaye isebenza kakuhle-ukusuka kwindawo zokubamba amacango aphandle ukuya kwizindlu zokuhlambela ezicocekileyo nezinamanzi asebenza kakuhle. Ezinye zezinto nje ezimbalwa oza kuzifumana:
Zonke izixhobo zisebenza ngokufanelekileyo
Izitshixo ezisebenzayo kuzo zonke iingcango kumagumbi okulala kwiindawo ezisetyenziswa nangabanye abantu
Zonke iindawo zicocekile yaye ziqoqoshiwe
Ababuki zindwendwe abagqwesileyo
Ababuki zindwendwe abakwi-Airbnb Plus bakwinqanaba eliphezulu (le-4.8 nangaphezulu), bakulungele ukunceda, kwaye bakhathalele nezona zinto zincinci ezikwenza uzive usekhaya—njengamashiti athambileyo namakhitshi anento yonke.
Indlela yokubhalisa xa ufika ethembekileyo
Xa usebenzisa iI-Airbnb Plus, unokubhalisela ukufika ngaphandle kwamagingxigingxi. Indawo nganye inebhokisi enesitshixo, indawo yokufaka ikhowudi emnyango, okanye kukho umbuki zindwendwe obizwayo aze kukubulisa.
Inkxaso ephezulu kakhulu
Xa ubhukisha indawo ye-I-Airbnb Plus , ufumana ingqalelo ejolisiweyo yeqela lethu elixhasa abathengi le-I-Airbnb Plus– iqela eliqeqeshwe kakhulu elizibopheleleyo ekunikeni inkonzo ebalaseleyo neempendulo ezikhawulezayo.
Fumana indawo egqibeleleyo I-Airbnb Plus ukwenzela uhambo lwakho olulandelayo
Jonga nje ibheji PLUS phantsi kwefoto yendlu.
PLUSiqinisekisiwe · EKapa
PLUS iqinisekisiwe EKapa
PLUSiqinisekisiwe · E-Barcelona
PLUS iqinisekisiwe E-Barcelona
PLUSiqinisekisiwe · E-Sydney
PLUS iqinisekisiwe E-Sydney
PLUSiqinisekisiwe · E-Los Angeles
PLUS iqinisekisiwe E-Los Angeles
PLUSiqinisekisiwe · I-Phoenix
PLUS iqinisekisiwe I-Phoenix
Yithi zava kumakhaya akumgangatho oqinisekisiweyo natofotofo akwi-Airbnb Plus, ukususela kwizindlu eziziibhangalo ngaselwandle e-Los Angeles ukuya kwiivenkile zeti ezisemgangathweni e-Kyoto.
Bonisa onke amakhaya